MUUSE GEELLE oo gaaray Kismaayo, una sii gudbaya CEELWAAQ + Ujeedka - Caasimada Online
Home Warar MUUSE GEELLE oo gaaray Kismaayo, una sii gudbaya CEELWAAQ + Ujeedka
MUUSE GEELLE oo gaaray Kismaayo, una sii gudbaya CEELWAAQ + Ujeedka
Kismaayo (Caasimada Online) – Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal Muuse Geelle Yuusuf iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaallo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo lagu soo dhoweeyey.
Muuse Geelle ayaa Kismaayo kula kulmi doono guddiga SEIT ee Jubbaland, isaga oo kala hadli doono dhammeystirka doorashada xubnaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya.
Sidoo kale guddoomiyaha FEIT oo loo galbiyey madaxtooyada Jubbaland ayaa kulan la yeelan doono hoggaamiyaha maamulkaasi oo uu kala hadli doono doorashada 16-ka kursi ee loo wareejiyey degmada Ceelwaaq, kadib markii la xallin waayey arrinta Garbahaarey.
Wararka ayaa intaasi kusii daraya in Muuse Geelle iyo xubnaha kale ee la socda ay u sii gudbi doonaan dhanka Ceelwaaq, si ay u qiimeeyaan goobta ay doorashada ka dhaceyso.
FEIT ayaa dhowaan soo saartay go’aan culus oo doorashada looga wareejiyey magaalada Garbahaarey oo aheyd deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, taas oo lagu saxiixay heshiiskii 17 September ee laga gaaray doorashada dalka oo marar badan dib u dhacday.
Arrintaan oo uu si weyn usoo dhoweeyey ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo afjareysa khilaaf muddo hortaagnaa dhammeystirka doorashooyinka, walow ay weli qaylo dhaan kasoo yeereyso maamulka iyo shacabka gobolka Gedo ee taabacsan Villa Soomaaliya.
Si kastaba, lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo natiijada kasoo bixi doonta doorashada kuraastaas oo ay isku hayaan Farmaajo iyo Axmed Madoobe.